विपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको परिसरमा ब्यूटी पार्लरदेखि किट्जीसम्म – NepalDubai.com
धरान । एउटा शैक्षिक संस्थाको हातभित्र ब्यूटी पार्लर, डान्स बार जस्ता गैर शैक्षिक कार्य गर्न ठाउँ दिईन्छ भने त्यसलाई कसरी बुझ्ने ? तर, धरानमा रहेको विपिकोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान परिसरमा प्रतिष्ठान कै पूर्व पदाधिकारीहरुको मनोमानीका कारण यस्ता गैर शैक्षिक गतिविधिहरु खुलेआम चलिरहेका छन् ।
प्रतिष्ठानको अतिथि गृहको ठीक पछाडि एउटा ब्यूटी पार्लर चलिरहेको छ । मासिक ५ हजार भाडा लिनेगरी यस भन्दा अघिका उपकूलपति बलभद्र प्रसाद दासले ब्यूटी पार्लर राख्न अनुमति दिएका थिए । प्रतिष्ठानमा ब्यूटी पार्लरको आवश्यकता पनि केही नरहेको र शैक्षिक संस्थाभित्र यस्तो गतिविधि सुहाउने कुरा पनि होईन ।
त्यस्तै, ब्यूटी पार्लरसँगै जोडिएको झण्डै १० कठ्ठा जतिको जमिनमा एउटा किट्जीछ । बच्चाहरुको लागि प्लेग्रुप सञ्चालन गर्नको लागि भनेर पूर्व उपकूलपति दासले नै आफ्ना भतिजा राकेश दासलाई अगाडि देखाएर आफैंले किट्जी सञ्चालन गरेका थिए । जबकी प्लेग्रुप सहितको अध्ययन गराईने दिल्ली पब्लिक स्कूल त्यही किट्जीको ५० मिटर अगाडि प्रतिष्ठानको स्वीकृतिमा धेरै पहिलेदेखि नै चलिरहेको छ । दासले नै त्यहि हाताभित्र आफ्नो कार्यालयमा एउटा डान्स बार समेत खोल्ने योजना बनाएको प्रतिष्ठानका एक अधिकारीले बताए । तर, धेरै विरोध भएपछि त्यो त्यसै रोकिएको थियो ।
यसरी पूर्व उपकूलपति दासले आफ्नो पद र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै प्रतिष्ठानको हाताभित्र यस्ता संरचना खडा गर्न अनुमति दिएको भेटिएको छ । अहिले प्रा. डा. राजकुमार रौनियार प्रतिष्ठानका उपकूलपति बनेर आएपछि किट्जीलाई तत्कालका लागि सञ्चालन नगर्नु भनेर निर्देशन दिईसकेका छन् । यस विषयमा अहिले अख्तियारमा मुद्दा पनि विचाराधिन रहेको छ ।
मातृशिशु अस्पतालको भवन निर्माणमा नै चलखेल
उता, सम्बन्धित निकायसँगको स्वीकृति विना नै ७६ करोडको मातृ शिशु अस्पतालको भवन निर्माण गर्ने निर्णय सिनेटबाट गराईदिँदा अहिले विपी प्रतिष्ठान गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्ने स्थिती देखिएको छ । पूर्व उपकूलपति दासले आफ्नो कार्यकाल सकिने बेलामा सिनेटबाट ४०० शैयाको क्षमता भएको मातृशिशु अस्पतालको भवन बनाउन टेण्डर लगायतका सबै प्रक्रियाहरु अगाडि बढाई दिए । जबकि अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग स्वीकृति नलिई यस्ता संरचनाहरु बनाउँदा मन्त्रालयले बजेट निकाशा गर्दैन । तर, प्रतिष्ठानमा दैनिक सामान खरीदको विल आउने गरेको छ । स्वायत्त संस्थाको सीमित स्रोत साधनका कारण आफू त्यति धेरै खर्च गर्न नसक्ने र मन्त्रालयले पनि स्वीकृति नै नलिई बनेको भवनलाई पैसा निकासा नगरिदिँदा अहिलेको समस्या सिर्जना भएको हो ।
प्रतिष्ठानका उपकूलपति रौनियारले अहिले आफूहरुसँग त्यति धेरै पैसा तिर्ने क्षमता नभएको भएपनि मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि पहल गरिरहेको बताए । तर, स्वीकृति नै नलिई काम सुरु गरि सकिएकोले मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउन पनि समस्या सिर्जना भएको रौनियारले बताए ।
अहिले मासिक झण्डै १० करोड रुपैयाँ तलबमा मात्रै खर्च हुने गरेको प्रतिष्ठानको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेको अस्पतालबाट प्राप्त शुल्क र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले तिर्ने मासिक शुल्क मात्रै हो । अहिले प्रतिष्ठानको दैनिक १५ लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको छ । तलब बाहेक पनि अन्य प्रशासनिक खर्च लगात अन्य उपकरणहरु खरीदमा नै खर्च हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा ४ सय शैया क्षमताको अस्पतालको भवन आफैं बनाउन सक्ने अवस्था नरहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
यस बाहेक पनि प्रतिष्ठानका पूर्व उपकूलपति दासले १४ करोडको एमआरआईको पुरानो मेसिन किन्न खोजेको, मोडुलर ओटी लगायतका सामग्रीहरु मापदण्ड विपरित खरीद गरिएका लगायतका धेरै विवादहरु कायमै रहेका छन् । मापदण्ड विपरित रहेको भनेर मोडुलर ओटी त जिन्सी विभागले अझै पनि स्वीकार्न सकेको छैन । १० करोड रुपैयाँमा किनेको सो उपकरण अझै पनि स्टोरले दर्ता गर्न नसक्दा त्यो त्यसै पुरानो बन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
त्यस्तै ४ वटा विना कामको भेन्टिलेटर पूर्व उपकूलपतिले जाने बेलामा किनेर गएका थिए । त्यो भेन्टिलेटर अहिले पनि बेबारिसे भएको छ ।
९ आश्विन २०७४, सोमबार २३:०२ मा प्रकाशित